Global Voices teny Malagasy » Hametraka Famotopotorana Ny Lafiny Filaminana Eo Amin’ny Vokatra Teknolojika i Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jona 2014 5:12 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Shina, Fitsipika, Mediam-bahoaka
Natao hiarovana ny “filaminana nasionalin'ny aterineto” izany rafitra izany, araka ny nambaran'ny  mpitondra tenin'ny Birao tamin'ny mpanoratra gazety. Andro iray mialoha ilay fanambarana, noraràn'i Beijing ny fampiasana ny Windows 8-n'ny Microsoft amin'ny solosain'ny governemanta
Navoitran'i Jiang Jun ihany koa fa manana lalàna mitovy amin'izany amin'ny famotopotorana akaiky ny vokatra sy ny tolo-draharaha vahiny ny governemanta Amerikana. Tamin'ny taona 2012, namotopototra  ny Huawei sy ny ZTE ny Kongresy Amerikana ary nampitandrina fa mampatahotra eo amin'ny lafiny filaminam-pirenena ireo orinasa Shinoa misahana ny Teknolojian'ny fifandraisana sy ny fampahafantarana ireo.
Maro noho izany ireo nahita fa setriny mivantana tamin'ny disadisa vao haingana teo amin'i Beijing sy Washington izany rafitra izany. Tamina tranga vao haingana, miaramila manamboninahitra Shinoa dimy  no voampanga ho nipiraty (niditra an-tsokosoko tao anatin’) ny solosain'ireo orinasa Amerikana enina sy nangalatra ny tsiambaratelon'ny orinasa.
Tao amin'ny Weibo, namariparitra ny rafitra ho daroka mahery vaika  amin'ireo hery mankahala an'i Shina ireo bilaogera nasionalista ary nilaza fa mety hiharan'izany ireo orinasa goavan'ny aterineto ao Etazonia, anisan'izany ny Cisco, IBM ary ny Microsoft.
Mety hampisy fiantrakany ratsy hoan'ireo fampiharana maro isan-karazany ampiasain'ny olom-pirenena izany lalàna mivoaka izany, ka anisany ny fitaovana fidifiana amin'ny sivana. Tamin'ny taon-dasa, fitaovana fidifiana amin'ny sivana antsoina hoe Open Door  no noesorina tao amin'ny Apple Store ao Shina. Ankehitriny, manana fototra araky ny lalàna mba hanerena ireo mpamatsy tolo-draharaha hanaisotra izay fampiharana “tsy ara-dalàna” mitovy amin'izany ny manampahefana Shinoa.
Nilaza tamin'ny gazety tao an-toerana  i Fang Bingxing, rain'ilay lazain'ny Shinoa hoe Manda Aroafo (Great Firewall) fa hiteraka “lisitra mainty” sy “lisitra fotsy” ilay rafitra fanarahamaso. Ka ireo vokatra voasokajy ao amin'ny lisitra fotsy ihany no mahazo miditra ao Shina. Hanomboka amin'ny fanarahamaso ireo tolo-draharaha sy vokatra informatika stratejika i Beijing.
Nanazava  ny fampahalalam-baovao ao an-toerana fa alohan'ny hidiran'ny vokatra teknolojika ao amin'ny tsena Shinoa, anisan'izany ny fitaovana tahaka ny finday raitra, solosaina sy ny fitaovana finday hafa, ny rindrambaiko tahaka ny rafitra fikirakirana (système d'exploitation) amin'ny solosaina, fandaharana sy fampiharana, dia hotakiana amin'izy ireo ny famotopotorana ara-teknika hanamarinana fa tsy mampidi-doza amin'ny filaminam-pirenena ireo vokatra. Ankoatra ny resaka filaminana, iharan'ny fandraràna ihany koa ireo vokatra izay mety mankany amin'ny ampihimamba satria mety hitondra fiantraikany ratsy eo amin'ny filaminana ara-tsosialy sy ara-toekarena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/05/60313/
 nanipika : http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-05/22/content_17533462.htm
 miaramila manamboninahitra Shinoa dimy: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2014/05/justice_department_indicts_five_chinese_military_officers_can_the_obama.html
 namariparitra ny rafitra ho daroka mahery vaika: http://weibo.com/2280198017/B5tRGrHR9?type=comment
 fitaovana fidifiana amin'ny sivana antsoina hoe Open Door: http://www.rnw.nl/english/article/apple-kowtows-china%E2%80%99s-censors-removes-circumvention-app-0
 Nilaza tamin'ny gazety tao an-toerana: http://news.163.com/14/0523/03/9STBVQ8O00014AED.html